Tonizia dia toerana mafana mpizaha tany ho an'ny Rosiana amin'ny teti-bola
Home » Toerana fitsangatsanganana » Tonizia dia toerana mafana mpizaha tany ho an'ny Rosiana amin'ny teti-bola
Desambra 24, 2019
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Novambra 2019, eo amin'ny 632,000 XNUMX ny mpanao fialantsasatra Rosiana tonga nitsidika Tonizia. Manodidina ny 3000 no antenaina hanao izany alohan'ny faran'ny volana desambra. Io dia fiakarana 5% amin'ny isa tamin'ny taon-dasa.
Raha ny filazan'ny lehiben'ny biraon'ny fizahantany nasionaly Toniziana dia sahabo ho 9 tapitrisa ny olom-pirenena vahiny tonga ao Tonizia amin'ny faran'ny taona.
Laharana faharoa amin'ny isan'ny olom-pirenena mitsidika an'i Tonizia i Russia. I Frantsa no lohalaharana. I Alemana no fahatelo.
Matetika, ny Rosiana dia mandeha fialantsasatra any Tonizia mandritra ny 7-10 andro, ka misafidy ireo hotely kintana telo na kintana efatra. Ny ankamaroan'ny mpizahatany avy any Russia dia miaraka amin'ny fianakaviana.
I Tonizia dia malaza amin'ny olon-dehibe, satria ny toeram-pialan-tsasatr'ity firenena ity dia manolotra programa fahasalamana ho an'ny kalitao. Tanjon'ny manampahefana fizahan-tany Toniziana ny hamadika ny fizotran'ireo mpizahatany ho dingana mandavantaona, mba tsy hisy ny fisondrotana sy fihenan'ny isan'ny mpitsidika vahiny.
OIKOS Afrika Atsinanana dia mandray anjara amin'ny fizahan-tany ara-tontolo iainana any Tanzania
Barcelona hampiakarana hetra amin'ny fizahan-tany amin'ny taona 2020